Film laga sameeyey kooxda bandy-ga qaranka Soomaaliya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Film laga sameeyey kooxda bandy-ga qaranka Soomaaliya
Fredrik: filmka sannadka
La daabacay fredag 23 januari 2015 kl 15.47
Arbacada soo socota waxaa shaneemooyinka ka billaaban doona film dokumenteri ah oo ku sabsan kooxda bandy-ga ee qaranka soomaaliya ee ka dhisan magaalada Borlänge. Filmkan waxaa kooxda ka sameeyey Fredrik iyo Filip oo ah labo ruux oo caan ah oo sameeyo barnaamijo ka baxa telefishinada. Waa filmkii koobaad oo ay sameeyaan oo shaneemo laga shido.
- Muddo lix billood hadda laga joogo waxaan furay jarraa’id, waxaan ku arkay ciiwan sidaan ahaa ”Somalian oo iska duuwan gelisey ka qaybgalka tartanka aduunka ee Bandy ee lagu qaban doono Sibirien” markas waxaa illa noqotay wax la yaab leh, ciiwanka ayaa sawir ka qaadey oo u diray saxibkey Filip, waxaan ku iri arrintan waxbay noqon kartaa ma aadnaa Borlänge? Annaga oo an lacag wadan ayaan aadney oo iskaga nasiibsanay, kabacdiina waxaan la soconay kooxdan bandy-ga oo ka kooban dhallinyaro da’dooda tahay 17-18 sanno jiro ka soo cararay dagaalada soomaalia, kuwaas oo ku fiicnaadey bandy-ga, kana qaybgalay tartanka aduunka ee k dhacay Sibiria.
Sidaas waxaa yeri Fredrik Wkingsson oo asaga iyo saxiibkiis Filip ay wado sameeyeen filmkan. Filip iyo Fredrik ayaa ah labo ruux oo muuqaalkooda aad looga yaqaano telefishanada Sweden horeyna u sameeyey barnaamijo caan ah balse markii ugu horeysey ayey sameeyen film dheer oo shaneemo laga shido. Filmkan dokumentriga ah ee ”Trevlig Folk ” ayey waqti la socdeen kooxda dhallinyarada qaranka soomaaliya ee bandy-ga, kuwaas dhamaantod ku nool magaalada Borlänge.
Inta ay ku howlanaayeen mashruuca filmkan ayuu Fredrik sheegay in ay jireen tuhuno dadka ay ka qabeen oo su’aalaha la weydiinayey ay ka mid ahaayeen ”waxay mashruucan lagu qoslo ee ku howlan tahiin, ma Borlänge dooneysiin in aad ka sameysan wax lagu maadeyso”. Balse ugu danbeyn ´tii shakiyaddas meesha way ka baxeen ayuu yeri Fredrik Wikingsson.
Balse kalo shakigas iyo isfaham la’aantas ka dib filmka ayey sameeyaan kooxdan dhallinyarada soomaaliga ee bandy-ga ciyaarta ee ku nool Borlänge. "Filmkana waa filmkii sannadka, waa film abuuraya dareen cajaa’ib. Dadka markey daawanayaan way ownayaan oo qoslayaan. Markuu dhamaadana ayago oo dareemaya farxad bay ka baxaan", ayuu yeri Fredrik Wikimgsson.
Filmkan ayaa shaneemooyinka qaarkood laga shidi doonaa laga billaabo 28ka bisha januari
Soomaaliya oo tartanka aduunka ee bandiga ka qayb-galeysa sannadka soo socda